Ithegi: isixhobo segrama | Martech Zone
Maka: isixhobo segrama
Olona luHlola luLungileyo lweeGrama kwiiblogi, ii-imeyile, iselfowuni kunye neMithombo yeendaba yeNtlalo
Lwesine, Okthobha 8, 2020 NgeCawa, ngoMatshi 7, 2021 Douglas Karr
Ukuba ukhe wafunda Martech Zone okwethutyana, uyazi ukuba ndingasebenzisa isuntswana loncedo kwisebe lokuhlela. Ayikuko ukuba andikhathali ngopelo kunye negrama, ndiyayenza. Ingxaki yinto yesiqhelo. Sele kuyiminyaka ndibhala kwaye ndipapasha amanqaku ethu kubhabho. Abahambi ngamanqanaba aliqela okuvunywa- bayaphandwa, babhalwa, kwaye bapapashwa. Ngelishwa, ndibangele